[Ubushushu bomgangatho wendlu yonke] Igumbi lebhedi enkulu/Isikrini esikhulu esibonakalayo/Indlu yangasese eyomileyo nemanzi eyahlukanayo/Izithuthuthu zasimahla/Disneyland/Inokwamkela abantu aba-2/Igadi enkulu/imbeko yothethwano
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJoy
UJoy unezimvo eziyi-419 zezinye iindawo.
Indlu yomyili yenziwa ngononophelo ngabafazi abancinci ababini abazalwa kwiminyaka eyi-90
Ikhulu le-intshi enkulu yokubonisa isikrini
Ukuzimela kunye nentendelezo encinci
Indawo ivulekile kwaye ikhanya, kwaye intendelezo yangaphandle ifana nebha ye-oxygen yendalo
2. Uhlobo lwebhedi: ibhedi eyi-1.8. Ungaphila abantu ababini.
3. Igumbi libandakanya izidlo zakusasa ezimbini simahla, Bhukisha ubusuku obunye ukonwabela ukuthathwa okanye ukuhanjiswa kwe-Disney yendlela enye, kunye nenkonzo enye yokuya nokubuya ubusuku obubini.
4. Ibandakanya inkonzo yokugcina impahla yasimahla.
5. Kwigumbi: iprojekti, i-heater yamanzi, i-air-conditioning ephakathi, ukufudumeza umgangatho, i-intanethi, i-Wi-Fi, isomisi seenwele, i-kettle, izinto zangasese ezilahlayo.
6. Ukudubula kwintengiso kufuna intlawulo eyongezelelweyo, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi ngexabiso
Igumbi ligumbi lokulala elinegumbi lokuhlambela
Ummandla ojikelezileyo sisitrato esiphithizelayo sezorhwebo, esizele kukutya, iziselo nolonwabo, kwakunye neebhanki, iivenkile ezithengisa iiyure ezingama-24, iivenkile ezinkulu, iibhanyabhanya, kunye nezithuthi ezilula.
I-Shanghai Disneyland: I-shuttle yamahhala ye-villa ukuya kwi-Disneyland ithatha malunga nemizuzu eyi-10
I-Shanghai Wild Animal Park: malunga nemizuzu eyi-12
Shanghai Pudong International Airport: imizuzu engama-20
Shanghai Hongqiao International Airport: imizuzu engama-40
Kufuphi neMetro Line 2 kwiSitishi saseChuansha, iMetro Line ye-11 yeSitishi seDisney
Ukuba awuqondi, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi ngolwazi olungakumbi!
尊敬的各位旅客你们好 我是专业的民宿房东 也非常欢迎来自五湖四海的朋友来指点我们一二 如果有任何做得不好的地方 还请你们反馈一下 我们会努力改进